Preferential कार ऋण को कार्यक्रम के हो?
निजी कार - यो राम्रो यस्तो कथन सक्दैन सबैको साथ तर्क गर्न हो। तर, यो खरिद सस्तो छ, र आफैलाई मोटर देखाउन सक्दैन हाम्रा सबै compatriots मा हेर्न अनुमति दिन्छ। हरेक वर्ष एकदम अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ कि लोकप्रियता कार ऋण कार्यक्रम प्राप्त छ किन कि छ। साथै, धेरै वर्ष को लागि, त्यहाँ रूस लागि preferential कार ऋण कार्यक्रम छन्। तथापि, पहिलो कुरा पहिले।
कसरी ऋण प्राप्त गर्न एक कार मा
मिति, त्यहाँ क्रेडिट मा एक कार किन्न तीन तरिका हो। कार कार्यक्रम:
आधारभूत। यो कार्यक्रम सामान्य उपभोक्ता उधारो समान छ। यो, तपाईं दुवै नयाँ र प्रयोग वाहन को प्रयोगमा किन्न अनुमति दिन्छ, र यो महत्वहीन छ यो घरेलू वा विदेशी उत्पादन हो। उधारकर्ता रकम को रसिद को क्षण देखि वाहन को चयन र खरिद कुनै 90 दिन भन्दा दिइएको छ। कार खरीद पछि बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ। को को राशि भरोसा ऋण अप गर्न लाख5rubles र ब्याज दर रूपमा 20% उच्च हुन सक्छ। पैसा कार ऋण को आधारभूत कार्यक्रम गर्न5वर्ष को लागि उपलब्ध छ।
संबद्ध। यो विकल्प लगभग मात्र फरक यो तपाईं उधारो बैंक को साझेदार हो जो लाउंज, एक कार किन्न भने, ऋण मा ब्याज दर केही कम गर्न सम्भव छ कि हुनुको संग नै आधारभूत avtosubsidirovanie छ। यो कार्यक्रम धेरै बेफाइदा छ:
यसरी सफल छैन प्रयोग कार किन्न;
विकल्प विशिष्ट शोरूम मा प्रस्तुत छ कि ती मोडेल प्रतिबन्धित छ;
कम्तिमा 20% को थालनी योगदान तयार हुनेछ।
राज्य कार्यक्रम preferential कार ऋण को। एक कार्यक्रम जस्तै लागि ऋण रकम एक कार को लागत को 85% हुन सक्छ, तर भन्दा बढी हुन सक्दैन 800 हजार। rubles। बदलाव समय - छैन3अधिक वर्ष। preferential कार ऋण को कार्यक्रम को सार को भाग हो ऋण मा ब्याज एकदम उधारकर्ता लागि ब्याज दर कम जो, तपाईं को लागि राज्य repays। यस्तो सब्सिडी को दर, CBA पुनर्वित्त दरमा पूर्ण निर्भर अर्थ तर प्रत्येक मामलामा फरक हुन सक्छ।
Preferential कार ऋण कार्यक्रम पहिलो 2009 संकट समयमा रूसी संघ मा परीक्षण गरिएको थियो। यो निर्णय, सँगै पुरानो कार को रिसाइकिलिंग को एक कार्यक्रम संग घरेलू Automakers afloat राख्न र एकदम रूस को छिटो अपग्रेड मदत गरे। तथापि, preferential कार ऋण को पहिलो कार्यक्रम कमीकमजोरी एक नम्बर थियो:
यो ब्रान्ड को कार को औसत लागत 350 हजार। Rubles भन्दा बढी थिएन रूपमा मूल कम्पनी "AvtoVAZ" समर्थन गर्न, डिजाइन गरिएको थियो।
लामबद्ध, कार्यक्रम को कार्यान्वयन को लागि उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मात्र 10 नाम, धेरै उपभोक्ता विकल्प उपलब्ध थियो।
कार को मूल्य कम्तिमा 30% - प्रश्न अर्को नकारात्मक पक्ष एकदम उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी छ। सबैले किन्न सक्छन् एकै समयमा नै रकम राखे।
तैपनि, समय को खण्ड संग, कार्यक्रम धेरै लोकप्रियता प्राप्त, प्रारम्भिक भुक्तानी आधा भएको थियो, र दायरा पाँच पटक विस्तार भएको छ। आज हामी preferential कार ऋण कार्यक्रम व्यक्तिगत वाहन खरिद गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका हो भनेर निश्चय साथ भन्न सकिन्छ। तथापि, विभिन्न समयमा avtosubsidirovaniya कार्यक्रम रोकियो छ, फेरि फेरि सुरु गरियो, र 2015 को पूर्वसन्ध्या मा भविष्यमा यसलाई जारी राख्न चाहे गर्न धेरै बहस भएको।
कार को एक नयाँ सूची
वर्तमान आर्थिक स्थिति, एकदम अस्थिर छ भन्ने अप्रिल 1 तथ्यलाई बावजुद, 2015 preferential कार ऋण को एक नयाँ कार्यक्रम कमाए। स्वतः सूची, 50 स्थितिहरू गर्न widened तर, नयाँ सर्त शुरू: यस्तो कार्यक्रम 2015 को लागि हुनुपर्छ लागि प्राप्त कार।
LADA - 1117
LADA - 2115
GAZ - 2217
UAZ - 2206
LADA - 1118
GAZ - 2310
UAZ - 2360
LADA - 2131
GAZ - 2752
UAZ - 3741
LADA - 2171
GAZ - 3221
UAZ - 3909
LADA - 2072
UAZ - 3062
LADA - 2329
100 सी TagAZ
TagAz रोड साझेदार
आईएल - 2717
यसरी, यो वर्तमान वर्ष खरिदका लागि प्रस्ताव कार को सूची एकदम व्यापक र घरेलू मोडेल सीमित छैन भनेर स्पष्ट छ।
स्वतः ऋण सर्तहरू
2015 मा पनि परिवर्तन र अनुकूल सर्तहरू मा कार ऋण को मुद्दा को लागि आवश्यकताहरु केही:
concessional उधारो सर्तहरू अन्तर्गत खरिद वाहन को कुल मूल्य, अधिक सक्छ 1 लाख rubles;
ऋण अधिकतम सम्भव रकम - 800 हजार RBL;।।
न्यूनतम ऋण रकम बैंक आफैमा निर्धारण गर्न सकिँदैन;
ऋण मात्र रूसी rubles उपलब्ध छन्;
ग्राहक किन्न, रूस को क्षेत्रमा संकलित गर्नुपर्छ इरादा कि कार;
ट्रक चुनिएको 3.5 टन भन्दा बढी हुन सक्दैन मोडेल को कुल ठूलो रूपमा, यस्तो तरिकाले किन्न सक्ने छैनन्;
ऋण 36 महिना (3 वर्ष) अधिक एक अवधिका लागि जारी हुन सक्छ;
खरिद वाहन पहिले प्राकृतिक व्यक्ति छैन जारी हुनुपर्छ गरिएको र दर्ता गर्न (दर्ता) अनुसार रूसी कानून संग;
उधारो दर ब्याज दर एक वित्तीय संगठनको सम्झौता मा stipulated र ऋण प्रक्रिया को समयमा रूसी संघ को केन्द्रीय बैंक को देंगे दर दुई-तिहाई बीच फरक रूपमा गणना गरिएको छ;
रकम फिर्ता मात्र तय-अवधि ब्याज दर लागू;
पूर्वभुक्तान (तल भुक्तानी) 20% छ, तर त्यहाँ थप (उधारकर्ता को अनुरोध मा) हुन सक्छ;
क्रेडिट रूस को नागरिक मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्।
ब्याज दर कस्तो छ
यसरी, preferential कार ऋण कार्यक्रम ऋण मा ब्याज मात्र भाग लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ, यो रूस को केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाए हालको पुनर्वित्त दर मा निर्भर गर्दछ। सरल गणना प्रदर्शन, तपाईं आफैलाई पाउन सक्नुहुन्छ, कति प्रत्येक मामलामा भुक्तानी गर्न छ। यो गर्न, सरल सूत्र प्रयोग:
भज = एसी - 2/3 एक्स संदर्भ, wherein:
भज - वार्षिक ब्याज दर;
जीसी - क्रेडिट को मानक योजना अन्तर्गत ऋण को दर्ता को समयमा प्रभाव मा ब्याज दर;
Ref - को सीबीआर द्वारा% देंगे सम्झौता को निष्कर्षमा को समयमा।
01.04.2015 को रूप मा, देंगे दर जो पुन: प्राप्ति भाग तत्संबंधी 9.33% छ भन्ने हो 14% छ। त्यसैले, तपाईं, राज्य लाभ कार्यक्रम प्रयोग मा प्रतिवर्ष 20% कार ऋण प्रदान बैंक सम्पर्क भने, प्रति वर्ष 10.67% को कुल भुक्तानी गर्नेछ। निस्सन्देह, सबै बैंकहरू मा आधार दर फरक छन्, त्यसैले प्रत्येक मामला मा गणना परिणाम फरक हुनेछ।
कार ऋण को लागि आधारभूत अवस्था
एक कम कार्यक्रम मा कार ऋण को लागि, उधारकर्ता कुनै विशेष आवश्यकताहरु लगाएको छैन। निस्सन्देह, प्रत्येक बैंक यसको आफ्नै नियम छ, र अवस्था अलि फरक हुन सक्छ, तर निम्नानुसार उधारकर्ता को औसत पोर्ट्रेट छ:
रूसी 21 भन्दा साना संघ र कुनै 60 पुरानो वर्ष को एक नागरिक;
यो पछिल्लो6महिनाको लागि कम से कम काम को एक स्थायी ठाउँ छ;
दर्ता र एक विशेष बैंक सेवाको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ;
मासिक भुक्तानी ढाक्न पर्याप्त एक स्थिर आय को उपस्थिति पुष्टि गर्न सक्षम।
खराब क्रेडिट इतिहास र छ महिना को उमेर मुनिका बच्चाहरु को उपस्थिति (महिलाहरु को लागि): हाम्रो अनुभवबाट हामी त्यहाँ मात्र2विकल्प, जो अस्वीकार गर्न सकिँदैन preferential avtossud छन् भनेर भन्न सकिन्छ।
को preferential कार ऋण कार्यक्रम सबै बैंकिङ्ग संस्थाहरू मा लगभग एउटै देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई बाबजुद मापदण्ड केही अझै अलि फरक हुन सक्छ:
आधार उधारो दर (जो देखि अनुदान कटौती गरिनेछ एक);
न्यूनतम अवधि ऋण बनेको छ जसको लागि;
उधारकर्ता, सेवा र तलब लम्बाइ आदर गर्न आवश्यकताहरु;
थप जमानत वा guarantor आकर्षण लागि आवश्यकता;
ऋण को न्यूनतम रकम;
दर्ता (दर्ता) जहाँ ऋण जारी छ क्षेत्रमा ऋणी, को लागि आवश्यकता।
सामान्य मा, preferential कार ऋण को एक कार्यक्रम implies भनेर निम्न कागजातहरू एक उधारकर्ता:
उधारकर्ता को नागरिक राहदानी, साथै ऋणी विवाहित हो भने आफ्नो पत्नी (पति),;
बैंक गर्न जमानत रूपमा वाहन स्थानान्तरण गर्न अन्य पति को लिखित सहमति;
चालक अनुमतिपत्र (कुनै छ भने);
पृष्ठभूमि 2-पिट (आय);
श्रम पुस्तक, आधिकारिक काम अन्तिम स्थानमा प्रमाणित देखि एक निकाल्ने;
बिक्री सम्झौता वा सानो घर को प्रमाणपत्र खाता, कार को मूल्य साबित।
प्रत्येक संगठन यसको आयोजित किनभने क्रेडिट नीति, आवश्यक कागजात सूची एकदम भिन्न हुन सक्छन्। तर, अलिखित नियममा प्रारम्भिक भुक्तानी ऋण अवधि छोटो र लामो, तल्लो बैंक द्वारा आवश्यक कागजात छ।
जहाँ यस्तो ऋण आकर्षित गर्न?
त्यसैले, कस्तो preferential कार ऋण कार्यक्रम, गठन थप वा कम स्पष्ट र ऋण यस्तो जहाँ सम्भव जारी गर्न? मिति, यस्तो सेवाहरूको फाइदा लिन भेटी रूस मा बैंकिङ्ग संस्थाहरू सूची, अझै पनि परिभाषित छैन, त्यसैले प्रत्येक मामलामा यो राज्य सब्सिडी प्राप्त गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ छ। तर, हामी यो सूची एकदम लामो छ कि निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ र, 2014 को अन्त्यमा, यो 130 भन्दा बढी संगठनका राशि। तिनीहरूमध्ये:
"एके पल्ट" बैंक;
बैंक "BTA-कजान" र धेरै अन्य।
त्यसैले उपयुक्त विकल्प फेला पार्न र 2015 रूस मा preferential कार उधारो कार्यक्रम फाइदा लिन कठिन हुने छैन।
द्वारा ऋण को पूर्ण लागत र यो के को लागि निर्धारण गरे जस्तै
साना व्यापार विकासका लागि क्रेडिट। स्वागत समस्या
के एउटा सेतो कोट लगाउन?
रूसी नौसेना - संरचना। रूसी नौसेना जहाज। रूसी नौसेना झण्डा
Rectal, लाभ, लागूऔषधको फारम लागि मोमबत्ती (suppositories)
"डाक्टर बर्मर्मल", समीक्षा: मिथक वा वास्तविकता
व्यवस्थापन विश्लेषण: एक संक्षिप्त सिंहावलोकन
बारहमासी Liana वैकल्पिक ठाडो बगैचा ल्यान्डस्केपिङ्ग
पुरातन पूर्व प्राचीन सभ्यताहरु। प्राचीन पूर्व पहिलो सभ्यता